Xalalka aasaasiga ah ee kaydinta xogta daruuraha - Talooyin - TELES MACLUUMAAD
ACCUEIL » QODOBO »Waa in xal loo helaa kaydinta macluumaadkaaga daruuraha - Talooyin
Dukumiintiyada ku dukaameysta oo si fudud u fududee xitaa markaad ka maqantahay guriga? Kanu waa ballankii lagugu ballanqaaday. Wali waa lagama maarmaan in la doorto xalka ugu haboon baahidiisa.
Daruurku wuxuu u oggol yahay kaydinta waraaqda kombiyuutar online. Waxay ka heli karaan casriga ama kombiyuutarka, haddii ay haystaan ​​caddaynta codsiga gaarka ah iyo in lagu xiro internetka. Si loo sii wanaajiyo dalabyada jira, waxaan ka wada hadli doonaa faa'iidooyinka iyo khasaariinta xalalka loo heli karo shakhsiyaadka.
Adeegga xitaa isku xira suugaanta xafiiska laga bilaabo Google
Tani waa mid ka mid ah adeegyada ugu badan ee lagu kaydiyo daruurta: waa in la sheegaa in Dropbox uu yahay mid aad u fudud in la isticmaalo. Dukumentiyada waxaa lagu keydsan karaa codsiga (webka ama mobile) ama adoo galaya akoontadooda internetka. Markaas kadib ayaa la isku duwi doonaa goobta shaqada. Kaydinta waa lacag la'aan 2 GB halkii qof, iyo qorshooyin meel bannaan oo dheeraad ah (illaa 2To) bilawda 9,99 € bishii. Dropbox aad u caan ah Google, Dropbox waxay u fidisaa suurtogalnimada suurtogalka ah ee xafiiska Google, waxayna fududeyneysaa in faylasha laga soo qaado Gmail tusaale ahaan. Xalku wuxuu sidoo kale soo jeedinayaa a qalab wadashaqeyn leh oo leh warqad. Xusuusin: maalmihii la soo dhaafay, Dropbox ayaa xaddiday tirada qalabyada la xariira 3 ugu badnaan koontada bilaashka ah.
Wax badan ka baro Dropbox
Google 100 Cloud Solutions
Isticmaal kasta oo leh cinwaan Gmail wuxuu si toos ah u leeyahay booska kaydka ah ee internetka: waa mid caqli-gal ah in xalka uu soo jeediyey Google uu si ballaaran loo isticmaalo. Meelaha kaydinta bilaashka ah ayaa muhiim ah (15 Go) laakiin waxa kale oo lala wadaagaa Gmail iyo Google Sawirro. Si kastaba ha ahaatee, waa suurtogal in la kiraysto meel bannaan. Faylasha waxaa laga soo rogi karaa codsiga (web ama mobile) iyo sidoo kale iyaga oo si toos ah ugu xiraya koontadooda Google. Markaas kadib ayaa la isku duubi karaa waqtiga dhabta ah. Google Drive wuxuu si gaar ah ugu wanaagsan yahay in la wadaago faylasha la isticmaalayaasha kale, gaar ahaan kuwa isticmaalaya Google Docs suuli.
Wax badan ka baro Google Drive
Xalka isku dhafan ee bey'ada Microsoft
OneDrive waa xalka ay geyneyso Microsoft: waa SkyDrive oo ka mida shirkad Maraykan ah. Xogta waxaa lagu kaydiyaa iyadoo la adeegsanayo codsiga mobile ama codsiga desktop. Faylasha waxaa loo simay inta u dhaxaysa casriga, kiniin ama kombiyuutar marka arjiga la dhigo oo la isku xiro. OneDrive sidoo kale waxay fududeyneysaa helitaanka Microsoft Office Suite - meel fiican oo loogu talagalay dadka isticmaala Word, Excel ama PowerPoint. Ugu dambeyntii, xogta ayaa sidoo kale la heli karaa iyada oo si toos ah isku xiraysa shabakadda internetka.
Kaydinta aasaasiga ahi waa bilaash xuduudda 5 GB .Xadgudubyada lacag bixinta waxay bilaabmayaan 2 € bishii. Wax badan ka baro OneDrive,
Adeegga kaydka ee Apple ee Apple
Warka wanaagsan ee loogu talagalay dadka isticmaala nidaamyada kala duwan: iCloud, adeegga daruur Kombuyuutarada laga bilaabo Apple, si fiican ayaa loo heli karaa Windows. Laakiin ma ahan Android, si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii xalal ahaan jiro. Sida Google Drive, iCloud horeyba waa qayb ka mid ah dalabkii loo heli karo qof kasta, oo leh 5Go boos bannaan. Sawirrada, faylasha ama macluumaad kale ayaa si isdaba-joog ah loo xoojiyaa. ICloud sidoo kale waxay leedahay faa'iido u ah bixinta dukumiintiyada loo sameeyay dhismaha xafiiska iWork. Meel dheeraad ah ayaa loo bixiyaa sida bil kasta, oo laga bilaabo 1 € bishii.
Xalka oo bixiya amni dheeraad ah
Waxaa laga heli karaa labada Windows, Mac iyo Linux, iyo on IOS iyo Android, pCloud waxay bixisaa meel xafidan oo bilaash ah ilaa 20 Go .waa sida xalalka kale, faylasha waa la heli karaa oo laga soo qaadan karaa codsi gaar ah. Marka laga soo tago dalabkeedu bilaashka ah, pCloud waxay bixisaa adeegyo lacago dheeraad ah oo dheeraad ah: meeshan kaydinta dabcan, laakiin ka sarreeya dhammaan suurtogalnimada isticmaalka galka diiwaanka oo loogu talagalay xogta ugu nugul. Adeeggan waxaa loo heli karaa 5 € bishii, ama hal keligood ah oo loogu talagalay nolosha.